टेम्के डाँडामा ‘भ्यू टावर’ बन्ने भएपछि स्थानीय हर्षित : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश १ टेम्के डाँडामा ‘भ्यू टावर’ बन्ने भएपछि स्थानीय हर्षित
भोजपुर । प्रदेश –१ सरकारले भोजपुरको धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र टेम्के डाँडामा भ्यू टावर निर्माण थालनी गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । प्रदेश सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनकुटाको रु. १३ करोड बढी लागतमा टावर बन्ने भएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको हो ।
तीन हजार १०० मिटर उचाइ रहेको टेम्के डाँडामा प्रदेश सरकारको रु. १३ करोड ६२ लाख ८१ हजार लागतमा भ्यू टावर निर्माण
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पशुपतिनाथमा विशेष पूजासहित सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन
भक्तबहादुर शाही - May 13, 2020
दैलेख । ठाटीकाँध गाउँपालिका १,२ र ६ का असिनापिडित परिवारले राहत पाएका छन् । मंगलबार तीनवटै वडाका ५७ घरधुरीले राहत पाएका हुन् । वैशाख २७...
लमजुङ । लमजुङमा आयोजित प्रथम ठाडोभाका खुला प्रतियोगितामा जमजुङको प्यारजुङको टोली प्रथम भएको छ । सो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक निकै रमाएका थिए...
Exclusive कौशिला कुँवर - June 29, 2020
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - March 28, 2020
सप्तरी, राजविराज । कोरोना भाईरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राजविराज नगरपालिकाले शनिबार देखि राजरंगशालामा व्यवस्थित हाटबजार संचालनमा ल्याएको छ...